फोटो / भिडियो Archives - baideshikrojagar
Category: फोटो / भिडियो
कार्तिक १५, २०७८ कार्तिक १५, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on शिद्धार्थ शुक्लाको यादमा शहनाज गिलले गाएको यो गीत युट्युवको ‘ट्रेन्डिङ १’मा (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । आफ्ना प्रिय साथी शिद्धार्थ शुक्लालाई गुमाउनुपर्दा नायीका तथा मोडल शहनाज गिल निकै दुखी छन् । उनीहरुको मित्रता बिग बोस सिजन १३ मा भएको थियो । तर अचानक शिद्धार्थ शुक्लाको असामयिक निधनपछि उनलाई समर्पित गर्दै ुतु यहीँ हैु बोलको गीतको भिडिओ सार्वजनिक गरेकी छन्। राज रन्जोधको शब्द तथा संगीतमा बनेको यो गीतको भिडिओ निर्देशन […]
काठमाडौं । चर्चित डान्सर सुशान्त खत्रीले आफूलाई प्रहरीले बिनाकसुर नियन्त्रणमा लिएर झा’पड हा’ने’को दावी गरेका छन् । फेसबुक लाइभमा आफ्नो पीडा पोख्दै प्रहरीको व्यवहारबाट मन दुखेको बताए । खत्रीका अनुसार उनलाई काठमाडौंको एउटा क्लवबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यहाँबाट सोह्रखुट्टे प्रहरीमा वृत्तमा लगेर एक घन्टा हिरासतमा राखिएको उनको भनाइ छ । उनले सुनाएको घटना विवरण […]
भाइटिका : कुन देशमा कति बजे साइत ? (विवरण सहित)
कार्तिक १५, २०७८ कार्तिक १५, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on भाइटिका : कुन देशमा कति बजे साइत ? (विवरण सहित)
भाइटिका : कुन देशमा कति बजे साइत ? (विवरण सहित) काठमाडौ । अन्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल बाहिरको लागि पनि भाइटिका लगाउने उत्तम साइत तयार पारेको छ । समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले २४ वटा देशमा टीका लगाउने सही समय तय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै नेपालीको बसोबास रहेको […]
मुम्बई — ला, pगूऔ,ष,ध मुद्दामा २५ दिनदेखि हिरासतमा रहेका बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान बिहीबार जमानतमा रिहा भएका छन् । मुम्बई उच्च अदालतले आर्यनसहित अर्बाज मर्चान्ट र मुनमुन धमेचालाई पनि रिहा गरेको हो । मुम्बई प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाको टोलीले गत अक्टोबर २ मा मुम्बईस्थित समुद्री किनारमा रहेको क्रुज सिपबाट आर्यनसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको […]
कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागले पाँच देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर र बायोइन्टेक कोरोना खोप लगाउने अनुमति दिएको छ । शुक्रबार खाद्य तथा औषधि विभागले उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर र बायोइन्टेक कोरोना खोप लगाउने अनुमति दिएको हो । योसँगै अमेरिकामा फाइजर र बायोइन्टेकका कोरोना खोप साना बालबालिकालाई लगाइने पहिलो […]
कार्तिक १४, २०७८ कार्तिक १४, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on अस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डाक्टरको हा’तमा, शरीर ग’र्भमै छु’ट्यो!
काठमाडौं/ सुत्केरीलाई अस्पतालको डे’लिभरी युनिटभित्र पठाएर बाहिर शुभ माचारको प्रतिक्षा गरिरहेका आफन्तको त्यतिबेला हो’सह’वास उड्यो जब डाक्टरले उनीहरुलाई डे’लिभरीको क्रममा बच्चाको टा’उको का’टिएको जानकारी दिए। डाक्टरका अनुसार बच्चाको टा’उको का’टिएर डाक्टरको हातमा आएको थियो र बाँकी शरीर आमाको ग’भभित्रै छु’टेको थियो। घ’टना भारतको तेलंगना राज्यको नागरकुरनुल जिल्लाको अछमपेट अस्पतालको भएको आज तकको समाचारमा उल्लेख छ। […]
कार्तिक १४, २०७८ कार्तिक १४, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते !
लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते ! काठमाण्डौः- वार्षिक कार्य तालिका अनुसार लाइसेन्सको परीक्षा लिन नेपाल नर्सिङ परिषद्ले मिति तोकेको छ । नाम दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षाका लागि मंसिर 11 गतेको मिति तय गरिएको जनाइएको छ ।परिषद् परीक्षा समितिले वार्षिक कार्य तालिका अनुसार नै मंसिर 11 गते परीक्षा लिने जनाएको हो । परीक्षामा सामेल […]
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर !
काठमाडौँ आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर ! नेपाल टेलिकमले अटम अफरमा सुविधा थप गरेर नयाँ ‘इको भ्वाइस प्लस डाटा कम्बो’ प्याक ल्याएको छ। पहिलाकाे अफर अन्तर्गत प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याक थियो। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** […]
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on मेरो किरिया कसैले नगर्नु, तिर्न रहेको बाँकि रकम श्रीमतीसंग लिनु भन्दै पत्रकार बाँस्तोलाले छोडे संसार
काठमाडौँ पत्रकारितासँग जोडिएका पोखराका श्रीप्रसाद बाँस्तोलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘सु’सा’इट नो’ट’ राखेर देहत्याग गरेका छन्। बालमैत्री मिडियाका प्रकाशक, पोखरा टेलिभिजनका पूर्व सिइओ, शुभलाभ एडभरटाइजिङ एजेन्सीका सिइओसमेत रहेका उनी बाल अधिकार नेपालका अध्यक्ष, शिशु विकास तथा स्याहार केन्द्रका सदस्य पनि हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार बाँस्तोलाले शुक्रवार बिहान […]
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on पारश र हिमानीको छोरीले पहिलोपटक सार्वजनिक गरे यस्तो तस्बिर (भिडियो)
सन् २००० डिसेम्बर १२ मा पुर्वयुवराज पारश शाह र आमा हिमानी शाहको जेठि छोरीका रुपमा जन्मिएकि पूर्णिका शाह अहिले २२ वर्षकि भएकि छिन् । सन् १९९९ मा वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका पारश र हिमानीले विवाह गरेको एक वर्षपछि पूर्णिकालाई जन्म दिएका थिए । हाल पूर्णिका उच्च अध्ययनकालागि थाइल्याण्डमा छिन् । उनी सामाजिक संजालमा सक्रिय छिन् । […]